टेलिकमको फोर जी कसरी चलाउने ? जान्नै पर्ने ७ कुरा - समायोजन खबर
नेपाल टेलिकमले आइतबार चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा 4G लन्च गरेको छ । हाल यो सेवा काठमाडौं र पोखरामा मात्र उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमको 4G कसरी चलाउने भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । जान्नुस् ७ कुराः मोवाइलमा 4G चल्छ कि चल्दैन कसरी जान्ने ? तपाईंको मोवाइल फोनको नेटवर्क सेटिङमा गई फोनले कुन-कुन प्रविधिमा काम गर्छ हेर्न…